Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina Wensimbi | I-Mestech
Uhlobo lwensimbi luhlale lwenzelwe onjiniyela ukuqinisekisa ukwakheka kwedivayisi noma komshini. IMestech inikeza ukukhiqizwa kwamakhasimende okwenziwe ngensimbi.
Uhlobo lwensimbiihlala yenzelwa onjiniyela ukuqinisekisa ukwakheka kwedivayisi noma umshini. IMestech inikeza ukukhiqizwa kwamakhasimende okwenziwe ngensimbi.
Izingxenye zensimbi zivame ukusetshenziselwa ukwenza izingxenye ezinemba kahle nezinsimbi zokusebenza, futhi zibiza kakhulu kunezingxenye zepulasitiki. Ukuze uthuthukise ukwakheka futhi unciphise ubungozi, kuyadingeka ukwenza amasampula wesampula wokuklama nokucubungula inqubo ngaphambi kokukhiqizwa okusemthethweni.
Izingxenye zensimbi zisetshenziswa kabanzi kwimishini ehlukahlukene nemishini. Imvamisa zisetshenziselwa ukwenza izingxenye ezinembayo ngenxa yokuzinza kwazo, amandla nobulukhuni, izici zokushisa eziphakemeyo neziphansi kanye nokuqhuba kukagesi, okuphakeme kakhulu kunezingxenye zepulasitiki.
Uma kuqhathaniswa nezingxenye zepulasitiki, kunezinhlobo eziningi zezinto zokwenziwa kwezingxenye zensimbi, njenge-aluminium alloy, i-alloy yethusi, i-zinc alloy, i-steel, i-titanium alloy, i-magnesium alloy njalonjalo, enezakhiwo ezahlukahlukene. Phakathi kwazo, ama-ferroalloys, ama-aluminium alloys, ama-alloys ethusi kanye nama-zinc alloys asetshenziswa kakhulu emikhiqizweni yezimboni neyomphakathi. Lezi zinto zensimbi zinezinto ezahlukahlukene zomzimba nezamakhemikhali, futhi ubuchwepheshe bokucubungula bezingxenye zensimbi ezinezakhiwo ezihlukile nobubunjwa buhluke kakhulu.
Ngokuya ngendaba nokwakheka kwezingxenye, kunezinhlobo eziningi zezinqubo zokukhiqiza ngobuningi zezingxenye zensimbi, ezinjengokusika, ukusakaza okokufa, ukuvala isikhala, ukukhahlela, ukugoba, ukukhipha kanye nokuhluza. Okwe-die-casting, blanking, extrusion kanye sintering, kusetshenziswa isikhunta. Isikhunta ngokuvamile sisho ukutshalwa kwezimali okuphezulu, ngakho-ke ukusika ngomshini kusetshenziselwa ukwenziwa kwabo okuyisibonelo.
Kunezinqubo ezintathu eziyinhloko zokwenza isampula yensimbi yesampula:
Ikakhulu esetshenziselwa izingxenye ngokunemba okuphezulu ntathu nezingxenye ezincane.
Imishini eyinhloko umshini wokugaya we-CNC, i-lathe, i-grinder, i-EDM, i-WEDM namanye amathuluzi womshini.
Ukucubungula indiza, indawo engaphezulu, inkatho nomgodi we-asi, umkhono, idiski, izingxenye zensimbi ezigobile nezicwecwe.
Amathuluzi womshini wokunemba okhethekile asetshenziselwa ukucubungula izingxenye ezinezidingo zokunemba okuphezulu. Izingxenye ezinjengamagiya, izinduku zesikulufu, njll.
2. Ukusebenza kwensimbi yeshidi
Kwisampuli yegobolondo nekhava enodonga oluncane nobukhulu obufanayo kuyo yonke indawo, inqubo yensimbi isetshenziswa kakhulu, okusho ukuthi, ngomshini wokusika we-laser nezinye izinto ezilula noma amathuluzi ngokugoba, ukusika, ukugxisha kanye nokushaya. Ngokuyinhloko kuncike ekukhiqizeni okwenziwa ngesandla.
Isibonelo, indawo yokuhlala izimoto, i-chassis yekhompyutha, njll.
3. Surface Post ukwelashwa
Ngemuva kokucutshungulwa kwemishini noma kwensimbi, ubukhulu bokuklama nobubunjwa buyatholakala. Ukuze uthole ikhwalithi enhle yendawo nokubukeka, ukwelashwa kwendawo kuyadingeka kaningi.
A. Surface kokuqeda: ukugaya, wokucwebezelisa, imiyalezo, laser eqopha futhi embossing.
B. Ukufafaza impuphu, i-electroplating, i-oxidation nokudweba.
Ama-prototypes we-Aluminium CNC
Precision ngomshini steel prototype
Ama-prototypes wensimbi engagqwali
Ubulukhuni obuphakeme, izici zokushisa okuphezulu okuncibilikayo nezidingo zokunemba okuphezulu kwezinto zensimbi zinquma ubuchwepheshe babo bokucubungula buhlukile kuleyo yezinto ezingezona ezensimbi (njengamapulasitiki) ekwenzeni ama-prototypes noma amasampula. Inkampani yethu inikeza amakhasimende uhla oluphelele lwe-one-stop prototype noma i-mockup yokukhiqiza nensizakalo, kufaka phakathi izingxenye zepulasitiki, izingxenye ze-silica gel, izingxenye zensimbi nokunye. Uma uyidinga, sicela uxhumane nathi.
Langaphambilini Faka ukubumba
Olandelayo: Isikhunta seplastiki somshini wokususa izinwele we-laser
I-3d Metal Printing Prototype
I-Metal Stamping Part Prototype
Prototype Sheet Metal Izingxenye